Difference between revisions of "Bhozhongora"
Revision as of 14:03, 29 May 2021 (view source)
(Created page with "'''Bhozhongora''' real name '''Washington Marimira''' is a Zimbabwean radio personality who works for National FM. He is known for discussing bizarre and hilarious sto...")
Revision as of 14:06, 29 May 2021 (view source)
'''Bhozhongora''' real name '''Washington Marimira''' is a [[Zimbabwean]] radio personality who works for [[National FM]]. He is known for discussing bizarre and hilarious stories together with [[Kanyemba Bonzo]].
[[File:Bhozhongora.jpg|thumb|Bhozhongora]] '''Bhozhongora''' real name '''Washington Marimira''' is a [[Zimbabwean]] radio personality who works for [[National FM]]. He is known for discussing bizarre and hilarious social stories together with [[Kanyemba Bonzo]].
Revision as of 14:06, 29 May 2021
Bhozhongora real name Washington Marimira is a Zimbabwean radio personality who works for National FM. He is known for discussing bizarre and hilarious social stories together with Kanyemba Bonzo.
Retrieved from "https://www.pindula.co.zw/index.php?title=Bhozhongora&oldid=105028"
This page was last edited on 29 May 2021, at 14:06.